Isbahaysi u dhexeeya KULMIYE iyo Garab UCID ah oo ku heshiiyey Murrashaxiinta ay u wadaan shirguddoonka Golaha Wakiillada | Somaliland Post
Home News Isbahaysi u dhexeeya KULMIYE iyo Garab UCID ah oo ku heshiiyey Murrashaxiinta...
Isbahaysi u dhexeeya KULMIYE iyo Garab UCID ah oo ku heshiiyey Murrashaxiinta ay u wadaan shirguddoonka Golaha Wakiillada
Hargeysa (SLpost)- Hotel Maansoor ee magaalada Hargeysa, waxa maanta ku qabsoomay Kulan ay heshiis ku kula saxeexdeen Xisbiga Kulmiye iyo Garab ka mid ah Xisbiga UCID oo oo ka kooban siyaasiyiin iyo 11 ka mid ah xildhibaannada Golaha Wakiilla uga soo baxay Xisbigaas.
Garabka Xisbiga UCID oo uu hoggaaminayo Xog-haye ku-xigeenkii Xisbiga ahna Xildhibaan ka tirsan Golaha Wakiillada ee dhawaan la doortay Cabdinaasir Yuusuf Cismaan (Qodax) isla markaana ay weheliyaan Siyaasi Maxamuud Saleebaan (Ramaax) iyo Prof Abyan, ayaa Xisbiga Kulmiye kula bahoobay Doorashada Shir-guddoonka Golaha Wakiillada, waxaanay kulankaas ku doorteen saddex xubnood oo ay is-bahaysiga Kulmiye iyo UCID u xusheen Shir-guddoonka Golaha Wakiillada Somaliland.
Munaasibadda lagu shaaciyey Isbahaysiga cusub waxa goob-joog ka ahaa Wasiirka Arrimaha Gudaha Maxamed Kaahin Axmed, hoggaanka sare ee Xisbiga Kulmiye, Wasiirro Xukuumadda ka tirsan, Murashax guddoomiyaha Golaha Wakiillada ee Kulmiye Prof Yaasiin Maxamuud Xiir iyo Kaadiriin Kulmiye ah.
Heshiiska labada dhinac ayaa laysku af-gartay in Guddoomiyaha Golaha Wakiillada uu noqdo Prof Yaasiin Maxamuud Xiir oo Kulmiye ah, halka Guddoomiye ku-xigeenka 1aad iyo Labadaas oo Xisbiga UCID la siiyey ay kala qaateen Xildhibaan Siciid Faarax Mire (Giirre) iyo Xildhibaan Cabdinaasir Yuusuf Cismaan (Qodax).
Ugu horeyn, waxa munaasibadda ka hadlay Xildhibaan Maxamed Xasan Siciid oo katirsan garabka UCID ee maanta heshiiska saxeexay, siyaasi Maxamuud Cali Saleebaan (Ramaax) iyo Axmed Cabdi Muuse Abyan oo halkaas ka hadlay, ayaa ku dheeraaday ujeeddada heshiiska labada xisbi, waxana ay hoosta ka xarriiqeen inay ka go’an tahay in wada-jir loo dhiso saddexda xildhibaan ee mudaneyaasha KULMIYE iyo UCID usoo sharraxeen shir-guddoonka golaha wakiillada.
Xildhibaan Siciid Faarax Mire (Giirre) oo loo gartay inuu u tartamo jagada guddoomiye-ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiillada, ayaa isaguna dhankiisa xildhibaanada KULMIYE iyo hoggaanka xisbigaba uga mahadnaqay inay soo dhaweeyeen rabitaankiisa shirguddoonka golaha, waxana uu caddeeyey inuu si buuxda ugu kalsoon yahay in heshiiska cusub ee maanta labada dhinac kala saxeexdeen uu horseedi doono gaadhitaanka yoolka shir-guddoonka.
Xildhibaan Cabdinaasir Yuusuf Cismaan (Qodax) oo u sharraxan jagada guddoomiye-ku-xigeenka labaad ee shirguddoonka wakiillada, ayaa shaaciyey in xisbiga UCID dhexdiisa lagu curdin-dhadhiyey hankiisii aan qarsoonayn ee la xidhiidhay shirguddoonka, balse uu hankaasi soo dhaweyn ka helay dhinaca xildhibaanada KULMIYE, taasina ay keentay inay labada dhinac ku heshiiyaan dhismaha shirguddoon labada xisbiba katirsan.
Wasiirka Xannaanada Xoolaha iyo horumarinta Kalluumaysiga, Mudane Siciid Sulub Maxamed oo halkaas ka hadlay, ayaa soo dhaweeyey heshiiska cusub ee labada dhinac kala saxeexdeen, waxana uu sheegay in saddexda xildhibaan ee loo xulay shirguddoonka wakiilladu yihiin rag shirraban, lagu kalsoon yahay, golahana hoggaamin kara.
Siyaasi Cali Xasan Maxamed (Cali-marreexaan) oo kamid ah saraakiisha xisbiga KULMIYE, ayaa si qoto dheer uga sheekeeyey muhiimadda ay leedahay in rag aqoontooda iyo kartidoodaba lagu kalsoon yahay loo xulo shirguddoonka wakiillada, waxana uu tilmaamay in xidhildhibaanada KULMIYE iyo garabka cusub ee xisbiga UCID kasocdaaba isla garteen in saddexdaas xidhibaan lagu taageero hammigooda la xidhiidha hoggaaminta golaha cusub ee wakiillada.
Xildhibaan Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir (Faratoon) oo isbahaysiga KULMIYE iyo garabka UCID u sharraxeen jagada guddoomiyaha golaha wakiillada oo halkaas ka hadlay, ayaa isaguna dhankiisa ka mahadnaqay taageerada labada xildhibaanada labada xisbi u muujiyeen, waxana uu xusay inuu si hufan qarankiisa ugu adeegi doono haddii uu hammigiisu guulaysto.
Guddoomiye-ku-xigeenka labaad ee xisbiga KULMIYE, Mudane Axmed Cabdi Xuseen (Axmed Cabdi-dheere) oo halkaas hadal ka jeediyey, ayaa guul siyaasadeed ku tilmaamay heshiiska cusub ee xisbiga KULMIYE iyo garabka UCID wada saxeexdeen, waxana uu xusay inay dhinacyadu ka wadashaqaynayaan sidii uu heshiiskaasi u guulaysan lahaa.
Guddoomiye-ku-xigeenka koowaad ee xisbiga KULMIYE, ahna wasiirka arrimaha gudaha, Mudane Maxamed Kaahin Axmed, ayaa sharraxay shaqsiyadda xildhibaan Yaasiin Xaaji Maxamuud Faratoon, waxana uu shaaciyey inay xisbi ahaan hore isula garteen guddoomiyenimadiisa, labada ku-xigeen ee xisbiga UCID kasoo baxay iyo xildhibaannada ay wataanna ku dhisayaan hammigooda.
Ugu dambayntii waxa halkaas lagu kala saxeexday heshiis buuxa oo ay dhinacyadu iskula garteen wada-hir loogu codeeyo sidii ay xildhibaan Yaasiin Maxamuud Xiir (Faratoon), xildhibaan Siciid Faarax Mire (Giirre) iyo xildhibaan Cabdinaasir Yuusuf Cismaan (Qodax) u noqon lahaayeen shirguddoonka golaha wakiillada Jamhuuriyadda Somaliland.